अपांगता भएका व्यक्तिले सरकार भएको अनुभव कसरी गर्ने ?::Leading News Portal From Nepal.
अपांगता भएका व्यक्तिले सरकार भएको अनुभव कसरी गर्ने ?
दुर्घटना वा अन्य शरिरमा आउने विभिन्न रोग समस्याका कारण मेरुदण्ड पक्ष्यघात (स्पाइनल कर्ड इन्जुरी) हुन्छ । एउटा स्वस्थ्य व्यक्ति अनि निम्तिन्छ अत्यन्तै दयनिय शारिरिक अवस्था ।
विकल्पको एउटै सहायक साधन हुन्छ व्हिलचियरमा जीवनभर बिताउनु । जसका खुट्टा निस्क्रृय हुन्छन् । कसैका हातसम्म निष्क्रिय हुन्छन चेतना गुमेका कारण दिशा पिशाब कन्ट्रोल गर्न असमर्थ हुन्छ व्यक्ति । दिशा पिसाब बाहिर निस्काशन गर्न विभिन्न सहयोगी औषधि साधन प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ । व्हिलचियरमा जीवन बिताउन बाध्य व्यक्तिलाई अझै सरकारले सम्बोधन त के नामसम्म उच्चारण गर्न नसक्नु स्पाइनल इन्जुरी भएका ब्यातिहरुलाई उपहास गरेको त होइन ?
खान लगाउन बस्न स्वास्थ्य उपचार सहयोग नभए यो समस्या भए पछि कल्पना गर्न सकिन्न । कुन बेला के हुन्छ । यति जटिल गम्भिर दयनियता हुन्छ स्वास्थ्य स्थिती जो भोग्ने बाहेक अन्यले त देख्ने, सुन्ने मात्र हो । जस्तै युरिन कन्ट्रोल् नहुने हुदा फोलिस क्याथेटर, सिआईसी जस्ता सहायक सामाग्री मार्फत युरिन ब्यागमा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा आयत गर्नु पर्छ । उत्पादन गर्ने कुनै कम्पनी अहिलेसम्म छैनन् । दिशाको निम्ति उस्तै अप्ठ्यारो झन्झटिलो उपाय नै अपनाउनु पर्छ । स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका ब्यक्तिको निम्ति नेपालमा कुनै सहायक साधन सामग्री बनिदैन र सरकारले अन्य मुलुकबाट ल्याएर लक्षित समूहलाई बितरण आजसम्म गरेको पनि छैन । के यो देशका नागरिक होइनन र स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका ब्यक्तिहरु ?, यो देशमा यस्ता ब्यक्तिले बाच्ने अधिकार छैन र ? एउटा नागरिकता प्रदान गर्ने बित्तिकै सरकारको दायित्व सकिन्छ र ?
प्रत्येक आर्थिक बर्षमा देश विकास र सबै जनताको समृद्धिको निम्ति भनेर बजेट ल्याइन्छ । सबै जनतालाई सम्बोधन गरेर जीवन उकास्ने किसिमको सार्वजनिक बजेट घोषणा हुन्छ । तर दुखका साथ भन्नु पर्छ आजसम्म मेरुदन्डमा सस्या भए पछि आधा मरेर, आधा जीवनसम्म विभिन्न औषधि उपचार सहायक सामाग्रीको भरमा बाच्ने यि बर्गलाई सरकारले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएकाहरुलाई नै भनी कुनै किसिमको सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिनु सरकार यस्ता व्यक्ति प्रती उत्तरदायी छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । पटक–पटक सिंहदरवार भित्र जनताको हकहित को लागि भनी बस्ने सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसंगै राष्ट्रपतिसम्मलाई स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका ब्यक्तिहरु नै गएर आफ्नो समस्या आवश्यकता सरकारले गर्नु पर्ने सहयोगको बारे ज्ञापन–पत्र छलफल जस्ता जानकारी पनि नगरेको होइन । तर पनि यो सम्वेदनशिल बिषयमा सरकार मौन बस्नु भनेको स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका सर्बसाधारण बाच्नु भन्दा मर्नु निको भनी सोचेको हुनु पर्छ ?
कम्तिमा सरकारी कर्मचारीले पाउने सेवा सुबिधासम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने हो भने यो बर्ग सरल तरिकाले काल पर्खन सक्थ्यो होला ।
स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भईसके पछि चेतना शून्य भागमा आउने अरु अत्यन्तै जटिल समस्या जस्तै बेड सोर युरियन इन्फेक्सन व्हिलचियरमा बस्दा चाहिने कुसन सुद्दा ओछ्याइने एयर म्याट्रेस देखिऔसधि उपचार खर्चसम्मका दैनिकि साह्रै पिडादायक छन। आर्थिक अभाव कै कारण यो समस्यामा भईसके पछि ब्यक्ति शरिरमा आउने गम्भीर समस्या उपचारको आर्थिकसंगै सम्बन्धित स्थानमा स्वास्थ्य उपचार नपाउँदा तड्पी–तड्पी व्यक्ति अकालमा रहरै रहरमा बाध्य बन्छन जीवन गुमाउन ।
यो सरकारले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्ति प्रती गरेको खेलवाड त होइन ? यो बर्गले सरकार भएको अनुभव कसरी गर्ने ?
‘सामाजिक परिवर्तनका लागि सानो प्रयास बाल अपांग टेवा संस्था’
वेव साइडः http://www.cdcakapan.org/
कोरोना र पुजिवादी संकट
लकडाउनमा बालबालिकाः अनलाइन शिक्षा कोकिन सरह